Daawo Sawirada : 8-Dal oo iskugu soo haray Koobka Qaramada Africa iyo & Warar kale (Sport News) . - iftineducation.com
iftineducation.com – Koobka Qaramada Africa oo si xiiso leh uga socda dalka Gaboon ayaa waxaa iskugu soo haray 8-Wadan kuwaas oo la isku aadiyay si ay kulamo kala bax ah u soo yeeshaan .
Xulka Qaranka Masar ayaa xalay ciyaar xiiso laheed ay la ciyaareen kaga badiyay Xulka Qaran Ghana , waxaana ciyaartaasi hal iyo Eber ku adkaatay Masar halka Wadamada Mali iyo Uganda ku kala baxeen Bareejo 1 iyo 1.
Wadamada 8-da ah ee u soo baxay wareega labaad ayaa waxa ay kala yihiin Masar , Ghana , Marooko , Senegal , DR.Congo , Tunisia , Burkina Faso iyo Cameroon . Dalalkaan ayaa wada ciyaari doona maalmaha Sabtida iyo Axada ee fooda inagu soo haya waxeeyna iskugu dhaceen sidatan :
Tunisia Vs Bukino Faso
Masar Vs Marooko .
*** Dhanka kale kooxda Juventus ee horyaalka Talyaaniga ayaa u soo baxday Semifinaalka Coppa Italia ka dib markii ay 2-1 ku garaacday naadiga Ac Milan . Juventus ayaa la ciyaari doonta naadiga Napoli waxaana la sugayaa kooxaha Inter Vs Lazio iyo Roma Vs Cesena kii soo gaara Semifinaalka Koobka Talyaaniga .
*** Kooxda Real Madrid ee horyaalka dalka Spain ayaa waxaa laga reebay koobka dalkaas ee Copa Del Rey .Real Madrid oo bareejo 2-2 ah la gashay naadiga Celta Figo ayaa koobkaan ka hartay maadaama is araga wajigii hore gurigeeda looga soo badshay 1-2. Kooxda Atletico Madrid ayaa u soo baxday Semifiinaalka koobkaan waxaana caawa la sugayaa tii soo baxdo kooxaha Fc Barcelona Vs Real Sociedad